စာဖတ်ခြင်းနဲ့ Audio book - Motivsuccess
- May 13, 2019August 8, 2019 - Thunn
?စာဖတ်ခြင်းဆိုတာ လူကြီးလူငယ်လူရွယ်မရွေး အတွက် အလွန်အရေးပါလှပါတယ်။✨ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း ကျွန်တော်တို့ ?စာအုပ်ကြီးကိုကိုင်ပြီး ဖတ်ရတာ ငြီးငွေ့လာတတ်သလို တစ်ခါတစ်ရံ စာအုပ်ကိုင်ပြီးဖတ်ဖို့ အချိန်နေရာမပေးတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ?‍♂️ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ပြီး အလွန်အသုံးဝင်စေမယ့် Audio Book နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ?‍♂️
?‍♂️Audio Book ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ်ကစာတွေကို အသံလှိုင်းအနေနဲ့ အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ စာသားနဲ့ အတူ အသံပါ ပူးတွဲပါဝင်တဲ့ စာအုပ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်ကတည်းက ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ?Audio Bookတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားလပ်ချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိကုန်ဆုံးနိုင်စေရန် အထောက်အပံ့ ကောင်းကောင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။? ?လမ်းသွားရင်း သီချင်းနားထောင်တဲ့အချိန်တွေကိုလည်း Audio Book နဲ့ အစားထိုးပြီး ဗဟုသုတ အသိပညာ တိုးပွားအောင် လုပ်နိုင်မှာလည်းဖြစ်သလို နားထောင်သူတွေရဲ့ English နားထောင်မှုစွမ်းရည် ကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။? သူငယ်ချင်းတို့ Audio Book တွေကို ဒီဖော်ပြထားတဲ့ ထိပ်တန်း Website ၁၀ ခုကနေ ရှာဖွေပြီး Download ဆွဲ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။?‍♂️
ကဲ…သူငယ်ချင်းတို့လည်းအားလပ်ချိန်တွေကို Audio Book လေးတွေနဲ့အတူတူ အကျိုးရှိရှိကုန်ဆုံးနိုင်ကြမယ်လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။? ဒီဆောင်းပါးက သူငယ်ချင်းတို့ကို အကျိုးရှိစေခဲ့တယ်ဆိုရင် တခြားသူငယ်ချင်းတွေကို Share ပေးဖို့လည်း မမေ့နဲ့ဦးနော်?ကျွန်တော်တို့ Facebook Page ကို Like & See First လုပ်ထားဖို့ သူငယ်ချင်းကို တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စာဖတျခွငျးနဲ့ Audio book
?စာဖတျခွငျးဆိုတာ လူကွီးလူငယျလူရှယျမရှေး အတှကျ အလှနျအရေးပါလှပါတယျ။✨ တဈခါတဈလကေတြော့လညျး ကြှနျတျောတို့ ?စာအုပျကွီးကိုကိုငျပွီး ဖတျရတာ ငွီးငှလေ့ာတတျသလို တဈခါတဈရံ စာအုပျကိုငျပွီးဖတျဖို့ အခြိနျနရောမပေးတာမြိုးလညျး ရှိတတျပါတယျ။ ?‍♂️ဒီတဈပတျမှာတော့ သူငယျခငျြးတို့အတှကျ အခြိနျကို အကြိုးရှိရှိအသုံးခနြိုငျပွီး အလှနျအသုံးဝငျစမေယျ့ Audio Book နဲ့မိတျဆကျပေးပါရစေ။ ?‍♂️
?‍♂️Audio Book ဆိုတာကတော့ ကြှနျတျောတို့ဖတျခငျြတဲ့ စာအုပျကစာတှကေို အသံလှိုငျးအနနေဲ့ အသှငျပွောငျးထားတဲ့ စာသားနဲ့ အတူ အသံပါ ပူးတှဲပါဝငျတဲ့ စာအုပျတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ၁၉၅၃ ခုနှဈကတညျးက ပျေါပေါကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ?Audio Bookတှကေ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အားလပျခြိနျတှကေို အကြိုးရှိရှိကုနျဆုံးနိုငျစရေနျ အထောကျအပံ့ ကောငျးကောငျးပေးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။? ?လမျးသှားရငျး သီခငျြးနားထောငျတဲ့အခြိနျတှကေိုလညျး Audio Book နဲ့ အစားထိုးပွီး ဗဟုသုတ အသိပညာ တိုးပှားအောငျ လုပျနိုငျမှာလညျးဖွဈသလို နားထောငျသူတှရေဲ့ English နားထောငျမှုစှမျးရညျ ကို သိသိသာသာ တိုးတကျစနေိုငျမှာဖွဈပါတယျ။? သူငယျခငျြးတို့ Audio Book တှကေို ဒီဖျောပွထားတဲ့ ထိပျတနျး Website ၁၀ ခုကနေ ရှာဖှပွေီး Download ဆှဲ ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။?‍♂️
ကဲ…သူငယျခငျြးတို့လညျးအားလပျခြိနျတှကေို Audio Book လေးတှနေဲ့အတူတူ အကြိုးရှိရှိကုနျဆုံးနိုငျကွမယျလို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။? ဒီဆောငျးပါးက သူငယျခငျြးတို့ကို အကြိုးရှိစခေဲ့တယျဆိုရငျ တခွားသူငယျခငျြးတှကေို Share ပေးဖို့လညျး မမနေဲ့ဦးနျော?ကြှနျတျောတို့ Facebook Page ကို Like & See First လုပျထားဖို့ သူငယျခငျြးကို တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။